Is afgarad laga gaaray waan waantii laga dhex waday Ra’iisul Wasaaraha & Musharaxiinta - Awdinle Online
Is afgarad laga gaaray waan waantii laga dhex waday Ra’iisul Wasaaraha & Musharaxiinta
Waxaa la sheegay in isfaham horudhac ah laga gaaray dhex-dhexaadintii lag dhex-waday Ra’iisul Wasaaraha siihaya xilka ee Maxamed Xuseen Rooble iyo Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha.
Ergada waan waanta waday oo uu hoggaminayo senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa ugu dambeyn ku guuleystay dadaaladii ay wadaan inuu is afgarad ka dhasho.
Maanta oo KHamiis ah ayaa waxaa la filayaa in Kulan ay mid kamid ah Hoteelada Muqdisho ku yeeshaan Ra’iisul Wasaaraha siihaya xilka, Madaxweynayaasha Galmudug & Hir-Shabeelle iyo Midowga Musharxiinta.
Ujeedka kulanka ayaa waxaa uu yahay Madaxtooyda oo dooneysa in la baajiyo banaanbaxa ay Midowga Musharixiinta ay doonayaan inay ku qabtaan Taalada Daljirka Daahsoon ee degmada Boondheere & khilaafka weli ka taagan arrimaha doorashooyinka.
Kulamadii u dambeeyay ee dhe-maray Ergada waan waanta waday iyo Midowga Musharixiinta ayaa waxaa aad u soo wajahay cqabado ay kamid yihiin in Musharixiinta ay dalbadeen in rali-eglin ay Xukuumadda ka bixiso wixii dhacay 19-kii Bishaan, hayeeshee Madaxtooyada ay aad ugu adkaatay wallow maanta siwyen looga hadli doono.
Previous articleMaxkamad xukun ku riday Nin ka tirsan Kooxda Daacish
Next articleHowlgal ka socda Beledweyne & weerar ka dhacay